Amin'ny dian-tongotra rehetra alehanao eo amin'ny fiainanao, na amin'ny faran'ny lalanao na ny antsasak'izao tontolo izao dia tsy hipoitra mihitsy ianao raha tsy fantatrao ny toerana misy anao. Amin'ny raharaham-barotra dia mbola zava-dehibe kokoa aza saingy mahagaga fa maro ny olona no tsy mahalala mazava tsara ny toerana hodiany, inona no ho endriky ny endriky ny endriny sa tsia, inona no hoentin'ny ambaratonga fototra aminao ary ahoana no hahafantaranao rehefa tonga any amin'ny tsirairay avy ianao azy ireo.
Mazava ho azy fa hisy ny hevitra sasany farafaharatsiny; to "make ny vola"," Aoka ho solontenanao manokana "sns fa miresaka momba ny fampivoarana izay antsoin'ny olona ny fahitana na ny iraka ataonao. Ao amin'ny tontolo idealy anao, inona no hitanao fa nataonao ary inona no itiavanao ny raharaham-barotra - mila manoratra izany ianao raha tsy voafetra ny eritreritrao ary tsy hainao tsara hoe ahoana no hataonao. Raha vao manana ny data mialoha ianao dia afaka mamorona drafitra iray hanaraka azy.
Raha mandeha mankany an-tanàna ianao na mandeha eny amin'ny arabe mankany amin'ireo fivarotana dia tsy ho afaka hahita ny sakantsakana na zava-mitranga hitanao ianao, raha toa ka manandrana manatanteraka ny zava-mitranga rehetra ianao ary manana valiny ho an'ny tsirairay alohan'ny handehananao Tsy ho afaka mihitsy ianao!
Mifidy ordinatera ianao ary matoky fa handresy zavatra ianao rehefa mandeha ianao - ny zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny lohanao dia ny toerana alehanao, afaka mahita ny toerana ao an-tsainao ianao ary izany no ifantohanao.
Tsy maintsy manao toy izany koa ianao amin'ny fandraharahana momba ny fandraharahana;
• manatanteraka ny tanjona farany,
• Aiza no tadiavina ary avy eo manomboka ny dingana lehibe amin'ny lalana,
• Firy taona ny drafitrao?
• Inona no tianao hatao isan-taona?
Azonao atao ny manomboka manangana ny drafitra an-tsipiriany avy amin'ity mappingotra ity.
Mametraha tanjona tsara
Ny fomba hanatratraranao ny tanjona dia manan-danja eo amin'ny fahombiazan'izy ireo.
Ireto torolalana goavana manaraka ireto dia mihatra amin'ny fametrahana tanjona mahomby:
Fanambarana marim-pototra: ambarao ny tanjonao amin'ny fomba tsara: 'Ataovy ity tetika ity' dia tanjona tsara kokoa noho ny 'tsy manao ity hadisoana adala ity'
Aoka ho marina: raha mametraka tanjona mazava ianao, mametraka daty, fotoana ary vola mba hahafahana manatsara ny zava-bitanao, dia fantatrao ny tanjona azo tratrarina, ary mety ho afa-po tanteraka amin'ny fananana tanteraka azy io.
Asio laharam-pahamehana: izay manana tanjona marobe, manome loha laharana ny tsirairay. Izany dia manampy anao hisoroka ny fahatsapana tebiteby amin'ny tanjona maro, ary manampy hitarika ny fifantohanao amin'ireo manan-danja indrindra.
Soraty ny tanjona hialana amin'ny fisafotofotoana sy hanome hery bebe kokoa azy ireo.
Tohizo ny tanjon'ireto tetikasa madinika ireto: Tazonina ireo tanjona izay arahinao haingana (ie amin'ity sehatra ity) kely sy azo tanterahina. Raha toa ka lehibe loatra ny tanjona iray, dia toa toa tsy mahavita mandroso izany ianao. Ny fitazonana tanjona kely sy ny fitrandrahana dia manome fahafahana bebe kokoa ho an'ny valisoa. Ny tanjona androany dia tokony ho avy amin'ny tanjona lehibe kokoa.
Tokony hojerena fitsipika ankapobeny momba ny fametrahana ny tanjona;
Asio fampisehoana fa tsy tanjona
Tena zava-dehibe izany. Tokony hikarakara ianao hametraka tanjona izay ahafahanao mifehy mafy araka izay azo atao - tsy misy afa-miala amin'ny tsy fahatanterahanao tanjona manokana noho ny antony tsy voafehinao tahaka ny tontolo iainana ratsy, ny tsy fitovian-kevitra, ny toetr'andro, ny faharatrana, na ny marina ratsy vintana. Ny tanjona mifototra amin'ny vokatra dia tena manimba ny tsy fahombiazana noho ny zavatra tsy mihoatra ny fifehezanao.
Raha mametraka ny tanjonao amin'ny fahaiza-manao manokana na fahaiza-manao na fahaizana azonao ianao, dia azonao atao ny mifehy ny zava-bitanao sy ny fahafaham-ponao.
Ohatra, azonao atao ny manatratra fotoana tsara indrindra amin'ny hazakazaka iray, nefa mbola tsy nahafeno fepetra noho ny fanapahan-kevitra tsy nety nitsara. Raha efa nametraka tanjona hiafara amin'ny fahatelo ianao dia ho faharesena izany. Raha mametraka tanjona tanjona ianao mba hahatratrarana fotoana iray manokana, dia ho azonao ny tanjona ary hahatonga fahafaham-po sy fahatokisan-tena amin'ny fahombiazany.
Ny fahadisoana iray hafa dia ny antony mahatonga ny tanjona azo avy amin'ny valisoa amin'ny fanatanterahana zavatra iray, na ara-bola izany na mifototra amin'ny fankatoavana ny mpiara-miasa. Amin'ny dingana am-piandohana, ireo dia ho antony manentana be loatra, na dia azo tanterahina aza, ny tombony amin'ny fanatanterahana bebe kokoa amin'ny ambaratonga mitovy. Ho lasa tsy dia mandrisika tsikelikely ianao.
Mametraha tanjona manokana
Mametraha tanjona voafaritra tsara. Raha mahatratra ny fepetra rehetra misy tanjona azo tratrarina ianao, dia afaka matoky anao sy mahazo aina amin'ny fahombiazany. Raha tsy mihaona amin'ny tanjona azo tratrarina ianao, dia azonao atao ny manitsy izany na manadihady ny antony tsy nahomby ary manao fihetsika mifanentana amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao.
Mametraha tanjona tena izy
Ireo tanjona dia mety hajanona noho ny antony manaraka:
Ny olon-kafa: Ny olon-kafa (ray aman-dreny, media, fiarahamonina) dia afaka mametraka tanjona tsy azo antoka ho anao, mifototra amin'ny zavatra tiany. Matetika izany dia atao amin'ny tsy fahalalana ny tanjonao, ny faniriana ary ny faniriana.
Fampahalalana tsy ampoizina: Raha toa ianao ka tsy manana fahatakarana mazava sy azo tsapain-tahaka momba izay tadiavinao hahatratrarana sy ny fahaiza-manaony ary ny fahaiza-mandanjalanja, dia sarotra ny mametraka tanjona mahomby sy realistika.
Manantena foana ny fahombiazanao: Maro ny olona no mametraka ny tanjony amin'ny asa tsara indrindra azony, na dia efa ela aza. Izany dia tsy miraharaha ny fihemorana tsy azo ihodivirana izay mety hitranga noho ny antony tsara, ary tsy miraharaha ireo antony izay nitarika ho amin'ny tsara indrindra. Tsara kokoa ny mametraka tanjona izay mampitombo ny fahombiazanao ary mampivoatra izany.
Ny tsy fanajana ny tena: Raha tsy manaja ny zonao hialana sasatra, fialam-boly ary fahafinaretana eo amin'ny fiainana ianao dia mety hitera-doza.
Mametraha tanjona loatra
Na izany aza dia mety ho ambany ny tanjona noho ny;
Tahotra ny tsy fahombiazana: Raha matahotra ny tsy fahombiazana ianao dia tsy handray ireo risika ilaina amin'ny asa tsara indrindra. Rehefa mampihatra ny fametrahana tanjona ianao ary hahita ny tanjona tanjona dia tokony hitombo ny fahatokisan-tenao, hanampy anao haka risika lehibe kokoa. Fantaro fa tsy zava-poana ny tsy fahombiazana: asehony anao ireo faritra izay ahafahanao manatsara ny fahaizanao sy ny fahaizanao.
Mora sarotra izany: Mora ny mandray ny antony tsy hametrahana tanjona avo lenta toy ny fialantsiny hametraka azy ireo ho ambany. Raha tsy vonona ny hikolokolo ianao ary hiasa mafy, dia tena tsy dia mahomby loatra ny manatratra izay tena sarobidy aminao.
Mametraha tanjona eo amin'ny sehatra mahitsy
Ny fametrahana tanjona amin'ny ambaratonga dia ny fahaiza-manao azony amin'ny fampiharana.
Tokony hametraka tanjona ianao mba hahalalan'izy ireo kely avy amin'ny fahatakaranao mivantana fa tsy hoe tsy misy fanantenana ny hahatratrarana azy ireo: tsy hisy olona hanao ezaka goavana hanatrarana tanjona iray izay heveriny fa tsy azo tsapain-tanana. Tadidio anefa fa tsy mety ny tanjona raha tsy misy ny tanjona. Ny finoana toy izany dia afaka miova amin'ny fampiasana fampiasana amin'ny fomba mahomby.
Ireo singa manokana toy ny reraka, ny fanoloran-tena hafa ary ny filàna fitsaharana, sns ... dia tokony ho raisina an-tsoratra rehefa tanjona ny tanjona.
Avereno dinihina ireo tanjona efa napetrakao, ary farano amin'ny toerany avy eo. Amboary izy ireo mba hihaona ireo soso-kevitra ary avy eo dia avereno jerena izany. Tokony ho hitanao ankehitriny fa zava-dehibe ny mametraka tanjona mahomby.
Mieritreritra tanjona iray
Rehefa mieritreritra ny fomba hahatratrarana tanjona ianao, dia anontanio ireto fanontaniana manaraka ireto dia afaka manampy anao hifantoka amin'ny tanjona ambany indrindra izay mitarika amin'ny fahombiazany;
Inona avy ireo fahaiza-manao ilaina hahatratrarana izany?
Inona no fampahalalana sy fahalalana ilaiko?
Inona no fanampiana, fanampiana, na fiaraha-miasa mila ahy?
Inona no loharano ilako?
Inona no afaka manakana ny fandrosoana?
Manao tombana ve aho?
Misy fomba tsara kokoa hanaovana zavatra ve?
Fampandrosoana fanambarana misiona
Amin'ny ankapobeny, ny fanambarana misiona dia mamaritra ny tanjona ankapoben'ny fikambanana.
Rehefa milaza ny fanambarana an-dàlambe, eritrereto ny vokatra, ny tsena, ny tsena, ny soatoavina, ary ny ahiahiny amin'ny sary.
Moa ve ny filazan'ny misiona dia ahitana filazalazana ampy izay anazavan'ny fanambarana mazava tsara ny iraka ataon'ilay fikambanana avy amin'ny fikambanana hafa?
Famolavolana fanambarana fahitana
Ny fanambaràna ny fahitana dia ahitana ny famaritana mazava tsara ny fikambanana raha toa ka mahomby ny asany.
Ny fampivoarana ny fahitana dia mety ho ny ampahany mahafinaritra indrindra amin'ny fandrindrana, fa ny ampahany izay fotoana mora miala aminao.
Mariho fa tany am-piandohana, ny fahitana dia fanehoana an-tsoratra momba ny fanjakana sy ny asan'ny fikambanana taorian'ny nanatanterahany ny drafitra stratejika. Vao haingana, nanjary fitaovana maotina kokoa ny fahitana.
Ny sanda dia maneho ny laharam-pahamehana fototra ao amin'ny kolotsain'ny fikambanana, ao anatin'izany ny zavatra izay mampita ny laharam-pahamehana eo amin'ny mambra sy ny fomba tena andraikitr'izy ireo ao amin'ny fikambanana, sns. Matetika izy ireo no mitondra ny tanjon'ny tetikasa "organiques".
Manangana sehatra efatra hatramin'ny enina enina izay tian'io fikambanana io miasa. Diniho ny soatoavin'ny mpanjifa, ny tompon-tany, ny mpiasa ary ny fiaraha-monina.
Ampidirina ao anatin'ilay drafitra stratejika, fihetsika mba hampifanarahana ny fitondran-tena marina amin'ny fitondrantena misimisy kokoa.
Manapaha ny tanjonao ary alamino ny tetezana tsirairay rehefa tonga eo ianao
TANJONA ANTOKA - Ampiasao ny zavatra tianao hotratrarina amin'ny taom-piasana 10 manaraka - avy eo ambarao ny dingana goavana tokony ho tratrarina isan-taona mba hahatongavana any - farafaharatsiny amin'ny hetsika isam-bolana amin'ny manaraka 1 na 2 taona ary isan-kerinandro Hetsika mandritra ny volana isam-bolana azonao atao mora foana.